Indlela olwakhiwe ngayo amathambo amahashe | Amahashe eNoti
Ubume bethambo lamahashe
UJenny monge | | Uhlobo lwehashe
Njengomphumo wendaleko ukwakheka kwethambo kwamahashe Kubekho iinguqu ezithile. Olu tshintsho lubonwa ikakhulu kwiziphelo zabo, nto leyo ibangela ukuba iminwe incitshiswe iye kwinto enye ejikelezwe zizinto ezibizwa ngokuba ngumnqwazi okanye iglasi.
Kwiziphelo zangaphambili, i-ulna kunye nerediyo zijoyinile, zinika ithambo elinye, kwenzeka okufanayo nge-tibia kunye ne-fibula, kuthintela izandla neenyawo ekujikeni ngelinye icala.
Okwangoku amathambo iintloko zamahashe zinde kwaye zinobuso obuphindwe kabini kubude bekakayi. Umhlathi nawo uphakanyisiwe, kunye nomhlaba obanzi kunye tyaba kumazantsi endawo yangasemva.
Amahashe anezinyo ezingama-36 ubuncinci apho i-12 ingama-incisors kunye nama-24 alimal. Ikholamu yakho yomqolo yenziwe ngamathambo angama-51.
Amathambo ehashe aqukethe amathambo angama-210, Olu luhlu luzalisekisa umsebenzi wokuba yinkxaso yemisipha, ukukhusela amalungu angaphakathi kunye nokuvumela ukushukumiseka ukuze ikwazi ukulawula isantya esahlukileyo.
1 Ukuvela kwamathambo ehashe
2 Amanqina amahashe
3 Intloko yamahashe
4 Intamo yamahashe
5 Umboko weequines
Ukuvela kwamathambo ehashe
Amathambo atshintshelwe ukwanelisa imisebenzi eyahlukeneyo.
Amahashe, njengezinye izilwanyana, ziye zavela kuyo yonke imbali yayo, it kuthetha ukuba ithambo lakho litshintshile. Olu tshintsho lunokubonwa ikakhulu kwiziphelo zee-equines, nangona zifunyenwe kwezinye iindawo zamathambo abo.
Ngenxa yokuhlala kwabo ekhaya kunye nemisebenzi abayinikwe ngabantu, amahashe anokuba nomonakalo kwinqanaba lemisipha okanye lamathambo, ke kubalulekile ukuba wazi ukuba unjani na umzimba wakho kwaye ngawaphi amalungu athanda ukwenzakala, ukuze uwuphephe Ngendlela elula.
Ukuba ufuna ukwazi okungakumbi malunga nethambo le-equines, qhubeka ufunda ukuba siza kukuxelela malunga nalo ngezantsi.
Umzimba weequines wahlulwe: yintloko, intamo, itrunk kunye neziphelo.
Iyonke amathambo amahashe enziwe malunga namathambo angama-210 kwaye umqolo wenziwe Amathambo angama-51. Kwii-vertebrae, ezisi-7 ngumlomo wesibeleko, i-18 thoracic, i-6 lumbar kunye ne-15 caudal. Amathambo anomsebenzi wokuxhasa izihlunu, kunye nokukhusela amalungu angaphakathi kunye nokuvumela ukushukumiseka ukuze bakwazi ukulawula isantya esahlukileyo.
Inyaniso enomdla kukuba amathambo amahashe awanazo i-clavicles. Endaweni yokuba indawo yangaphambili ibotshelelwe emqolo ngezihlunu, imisipha kunye nemisipha.
Siphawule ukuba ezona ndawo zenze olona tshintsho lukhulu, oku kuyabonakala kwimilenze yangaphambili apho I-ulna kunye nerediyasi bezimanyene kwithambo elinye. Kuyafana nange-tibia kunye ne-fibula. Kwimeko yokugqibela, ukumanyana kwala mathambo kuthintela ii-equines ekujikeni izandla neenyawo zise mva. Ukuthetha kwezandla neenyawo iminwe yancitshiswa ekubeni ibe nye ejikelezwe zizinto ezizi-horny ebizwa ngokuba ngumnqwazi okanye iglasi.
Iziphelo zangaphambili zezo zithwala ubunzima bomzimba wehashe.
Intloko yenye yezona ndawo zichazayo zamahashe kwaye ikwayenye indawo yamathambo etshintshileyo. Okwangoku, amathambo enza intloko yehashe ayaphakama kwaye zinobuso obude obuphindwe kabini kunamathambo okhakhayi. Umhlathi nawo wandisiwe, sinendawo ebanzi necabaleleyo emazantsi endawo yangasemva.
Ternilla, Yeyona ndawo inde kwaye iqine phakathi kwamehlo.
I-Chamfer, icandelo lobude belithole elinqamle iliso kunye neempumlo.
Izitya okanye i-fossae yokwexeshana, zizinto ezimbini zokudakumba ezifumaneka kwicala ngalinye lamashiya.
Ibha, yinxalenye yeekona zemilebe.
IBelfos, umlomo ongezantsi. Yindawo ebuthathaka kakhulu.
Umhlathi, Inxalenye yangasemva yomhlathi we-equine.
Emlonyeni, amahashe ubuncinci bamazinyo angama-36 kuwo ali-12 azizisisi kwaye angama-24 angama-molars.
Intamo ye-equine inayo imilo trapezoidal, Isiseko esibhityileyo ekudibaneni kwentloko nasebubanzi esiqwini somthi.
Intamo inomsebenzi obaluleke kakhulu ukusukela ungenelela kwibhalansi yeequines.
Inxalenye apho i-manes idibana khona inokuthe tye, i-concave okanye i-convex kuxhomekeke kuhlobo lwe-equine. Inqaku elinomdla malunga ne-manes kukuba banabantu abaninzi emadodeni kunabafazi.
Ayisiyondawo inkulu kuphela ye-equine anatomy, kodwa nayo izala ezinye zeempawu okanye ezinye kumahashe kuxhomekeke kubume bawo kunye nobumbano.
Ummandla we-thoracic vertebral ohambelana nommandla wokubuna kunye nomqolo, kunye nommandla we-lumbar ohambelana nokuphela komva kunye nomlenze, Banokufumana monakalo othile njengoko kuyindawo apho kubekwa khona isali.
Indawo edibeneyo yamagxa nayo inokulimala rhoqo kwiijack zokutsiba.
Es Kubalulekile ukuba umkhweli uchukumise indawo engaphezulu rhoqo ukuvavanya ukungonwabi okunokwenzeka Kwizilwanyana kwaye zinokunyangwa ngexesha.
Ukuthintela ukwenzakala, umkhweli kufuneka aphephe ukukhwela ihashe ngokuthe ngqo xa beshiya isitali, njengoko kubekwa ngesiquphe ubunzima kubo.
Isiqu sahlulwe sangamacandelo aliqela:
Cruz, indawo ephezulu kunye nemisipha ekupheleni kwentamo. Yindawo ekulinganisa ubude bamahashe.
Emva, imida nomnqamlezo ngaphambili, ngamacala emacaleni kunye nomqolo ngasemva.
Khawuleza, indawo yezintso.
qembu, Indawo yokugqibela ngasemva emida umsila.
Ngokuqhelekileyo, amacala ecroup.
UGirth, imida ngaphambili ngamakhwapha nasemva kwesisu.
Amagqabantshintshi okanye amaqatha, esiswini, ngaphambi kweenqanawa.
Njengoko sibona, amathambo ayatshintsha, kodwa kutheni olu tshintsho? amahashe ebeziqhelanisa nokwanelisa imisebenzi eyahlukeneyo.
Kufuneka kuthathelwe ingqalelo ukuba kuxhomekeke kugqatso kunokubakho iiyantlukwano ezithile kwezinye iindawo ze-anatomy.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amahashe kaNoti » abanye » Uhlobo lwehashe » Ubume bethambo lamahashe
Uhlobo olufanelekileyo lwehashe